Kungakhathaliseki ngesakhiwo noma ingadi, kuba njalo izingxenye eyodwa noma ngaphezulu, okungadingi nazo imisebe yelanga, kungakhathaliseki ekhaya noma emthunzini wesihlahla esikhulu. Kodwa ungakhathazeki ngakho. Izitshalo unothile kakhulu zilwane, futhi ungahlala eyolanda ukubekezelelana umthunzi-onothando noma umthunzi for engadini, okuzokwenza ukujabulisa izimbali namaqabunga zokuhlobisa.
Ukwahlukanisa izitshalo ngokuvumelana okufunwa ukukhanyisa
Ukukhanya kwelanga, amanzi kanye, emhlabathini omuhle evundile - ukuthi izidingo eziyisisekelo zezitshalo ukuqinisekisa ukutshalwa zabo eziphumelelayo zokuqhuba ibhizinisi. Kodwa akubona bonke izimbali nezihlahla efana imisebe eliqhakazile ilanga, kuye ngokuthi lokhu, zihlukaniswe amaqembu amathathu.
izitshalo Khanyisa abathanda for engadini, yesibili yegama yabo heliophyte. Bathanda ezivulekile elangeni kwazise umthunzi usuke ungekho angase afe. Ukuze leli qembu, iningi izimbali engadini. Kusukela unyaka: petunia, marigolds, lobelia, godetsiya njll Of zisetshenziswa, isib, Daylily, rudbeckia, Gaillardia, arabis, Stachys ... Futhi njengoba izihlahla: Maple Ginnala, Thuja occidentalis, nut Manchurian.
Shade nokubekezelana engadini. Leli qembu kuhlanganisa izinhlobo kakhulu uyakuthanda kwelanga, kodwa kwanele ke 5-6 amahora ekuseni noma ntambama. Nokho, zom ngesikhathi esifanayo kungase kungabi ezifana bedla nehlala njalo. Leli qembu kuhlanganisa izitshalo ezifana izinkuni Anemone, Astilbe, ohlanzekile eColumbine (isithombe sokuqala), Dicentra, peony, bluebell nokunye. D.
izitshalo Shade abathanda for engadini. Lezi zinhlobo uncamela sikhule Nooks lapho ilanga cishe akwenzeki. Zivame libhekene amahlamvu umbala ocebile oluhlaza. Okokuqala, lokhu ezinjengohlinzamfuku, Sebawoti, iminduze, lungwort, digitalis nabanye.
AmaConifers Shade-ukubekezela for engadini
izihlahla ezingabuni nezihlahla njalo engadini ikhubalo ekhethekile futhi sithokozise iso unyaka wonke. Bonke babe i iphunga emangalisayo, ethuthukisa isimo hhayi kuphela, kodwa futhi disinfects emoyeni. Zama-AmaConifers kukhona abaningi, sihluke ngobukhulu, ukuma umqhele, lifuna inhlabathi nokukhanya. izitshalo eziningi ungathandi ilanga elikhanyayo, futhi zezinhlobo abasha ngaphandle kokukhetha zidinga ezinye Ukufiphaza kusaqalwa sokukhula. Ethandwa kakhulu phakathi balimi ujabulele izinhlobo ezilandelayo AmaConifers umthunzi-ukubekezela:
sonwele Canadian, uphayini, prickly, Serbian futhi "Entelmani";
fir laseSiberia, ibhalsamu, waseCanada, omunye umbala;
yew "Repandens" futhi Canadian (esesithombeni);
thujopsis alengayo (Japanese);
Zonke AmaConifers ngempela linesizotha, kodwa abanye zidinga ukuthambisa ezinkulu kanye nendawo yokuhlala ebusika. Khulisa izinhlobo eziningi zokuhlobisa kancane ngokwanele ukuze ukwazi ukusebenzisa kwabo emagqumeni Alpine, ekutshaleni iqembu.
Ukukhetha nezihlahla umthunzi-ukubekezela
Shade nokubekezelana ensimini yase leli qembu kungenzeka uhlamvu luyingxenye zokuhlobisa noma balethe izinzuzo zama-practical. Ngaphezu kwalokho, zihlukaniswa nezihlahla engadini lezihlahla Ornamental futhi zezimbali. Ake abahlala ethandwa kakhulu kuyo yonke indawo.
Cornus mas - izihlahlana zokuhlobisa kakhulu, esetshenziselwa ekutshaleni iqembu bese udala Hedges. Spring embozwe ophuzi izimbali elimnandi bahlangana inflorescences isambulela futhi ekwindla nge izithelo elikhanyayo.
Lilac - izihlahlana enemisebenzi bukhule kuze kube-5 ubude. It has a ukumelana frost, isomiso, igesi okusezingeni eliphezulu okuqukethwe kwanda emoyeni. Ukhetha izindawo libalele, kodwa futhi umthunzi ngokwengxenye kuyelapha, nakuba izimbali kungase kungabi okuphawuleka kangako mningi.
Weigel - umthunzi ukubekezela isithwathwa nezihlahla Ornamental, zom obuningi, kusukela maphakathi no-ngasekupheleni kuka-May. Ifanele okwenza ezicijile, kokufika ngaphansi kombhede kwezihlahla ezinkulu.
Elderberries (ezimnyama, Canada) - izitshalo Ornamental ngesikhathi sokuqhakaza kwezimbali kanye nokulunga fruiting.
Jasmine (orange mbumbulu) - isithunzi-ubufakazi, undemanding, eziqinile. Summer izimbali ngobuningi embozwe awugqinsi, iphunga eqinile.
Spirea. Kukhona amamaki ahlukahlukene, ukuqhakaza e Entwasahlobo nasehlobo, inflorescences kungenzeka anemibala ehlukene (kusuka elimhlophe ngokunsomi).
Futhi of inothi iyona umthunzi ukubekezelelana ezilandelayo for engadini okuqondene iqembu nezihlahla unamaqabunga zokuhlobisa: privet, boxwood, euonymus (ezinamaphiko warty), Berberis thunbergii.
izihlahla Shade-ukubekezela engadini
Uma ufuna ukukhetha for engadini akuzona izihlahla zezithelo kanye Ornamental, kuyafaneleka ukunaka a izinhlobo ezimbalwa. Omunye izihlahla ezidume kakhulu sobuciko kuyinto maple. amahlamvu Lobed elikhulu Zinhle ikakhulukazi ekwindla, lapho uzuza umbala. Maple zinhlobo ngokwanele: ensimini, aquifolium, isiliva, omhlophe, ushukela, isi-Japanese. Izinkuni kudala nomqhele omuhle esakaza futhi kunalokho kuyanda. Iziqu esihlahleni kungenzeka ukutshala izimila eziqhakazayo umthunzi-ukubekezela for engadini.
It livame ukusetshenziswa engadini beech futhi hornbeam ihlathi, banalo izinhlobo engadini kanye namafomu. Bheka omkhulu, hhayi kuphela eqenjini kodwa futhi isivuno olulodwa, futhi umqhele sithenwe kalula futhi kumiswa.
izihlahla zezithelo kanye nezihlahla ezikhula emthunzini
Ababaningi izihlahla zezithelo kanye nezihlahla ezithile zikwazi ukuhluma futhi ukukhiqiza isivuno esihle emthunzini, kusadingeka ilanga. Phakathi izinhlobo ukumelana iningi kusimo ukukhanya iyona raspberry futhi amajikijolo, njengoba endaweni yazo yemvelo - a amahlozi ehlathi kanye nemihosha ezimanzi, umthunzi ngokwengxenye Zithwala kahle. Kungenzeka futhi ukuba isitshalo Barberry kanye gooseberries okuzokwenziwa izinhlobo omakhelwane ezinhle okukhulunywe ngazo. I izihlahlana kuqala ubusika-sithunywa likhula ngokushesha futhi ukunika isivuno esihle amajikijolo, okuyinto abe ukunambitheka ethize omuncu. Gooseberries (esesithombeni) nayo elinesimo izithelo eyigugu kakhulu, okuyinto asetshenziselwa ukwenza sezimoto kanye compotes.
Manje khetha izitshalo nezithelo umthunzi-ukubekezela for engadini kuba lula kakhulu, ngoba izinhlobo njalo ulwazi olusha. Vele Udinga ukukhetha izimpahla ngokuvumelana nezifiso zakho. Bheka ngqo nursery, njengoba izimakethe ngokuvamile ukudayisa ngokuphelele hhayi lokho okushiwo ku iphakethe.
Shade-ukubekezela Ezikhula iminyaka eminingi herbaceous for engadini
Uma ingadi yakho bahlanganisa ikakhulu emakhoneni ezinomthunzi akuyona isizathu sokulahla ithemba ukutshala izimbali. Ukuze Ezikhula iminyaka eminingi izitshalo ukuthi overwinter enhlabathini ngokuphindaphindiwe iminyaka, lo aboveground ingxenye uyafa off njalo ngonyaka, kanye izimpande ahlale ephila. Inzuzo enkulu Ezikhula iminyaka eminingi umthunzi-ukubekezela kuyinto amahlamvu zokuhlobisa.
Kusukela kwentwasahlobo kakhulu engadini yakho ungakwazi ukuhlobisa primrose eziyizigaxa. Ngalesi sikhathi izihlahla okwamanje ziyoncibilika amaqabunga ukukhanya lingena kalula kuwo wonke amakhona engadini. Kungenzeka Tulips ekuseni-zom, crocuses, prolesok, grouse daffodils, muscari.
Of Ezikhula iminyaka eminingi ezokwenza eziqhakaza zonke ehlobo, sincoma peonies njalo (i-semi umthunzi) kanye zasendle, arum, Adonis, saxifrage eColumbine (Aquilegia), Daylily, Sebawoti. Vele ungahambi emhlabeni ukunakwa izimbali zisetshenziswa: foxglove, hollyhocks, ukhohlwe-kimi.
unyaka Shade-ukubekezela engadini
Lezi zitshalo ziyahlukahluka iyiphi flowerbed noma imbali ingadi. Isibalo zinhlobo nezinhlobonhlobo ayikwazi ukudluliselwa. Ngisho ngoba engadini ezinomthunzi ungakwazi kalula pick up nedlanzana ezahlukene izimbali yonyaka. Uma sibala ezimbalwa lwezinhlobo ezivame kakhulu nesingakhangi njengesibonelo.
Ageratum - isitshalo amafomu ongaphakeme ngokoqobo ukhaphethi inflorescences okwesibhakabhaka, izimbali Uthatha ekuqaleni kwehlobo ukuze ekupheleni kwekwindla. It ukhetha umthunzi ngokwengxenye.
Kobe - i umvini yonyaka, okuyinto ukusonta emhlabeni ukhaphethi oluhlaza bonke ubuso ukusekelwa, ngesikhathi sasehlobo kukhona izimbali ezinkulu insimbi angamasongo anemibala ehlukahlukene.
Kosmeya - isitshalo enhle yonyaka, ngenkuthalo Ukhuthaza self-seeding. Luphakeme ngokwanele (1 imitha) futhi likhula ngokushesha, okuyinto ikuvumela ukuba ugcwalise idatha zalesi sihlahla izihlalo ezingenalutho phakathi nesikhathi esifushane.
Levkoy (ngenhla), izitshalo yobukhulu obuhlukahlukene kuncike ezihlukahlukene nge spike elimnandi efihlekile.
Okunye okuphawulekayo Nemesia futhi mimulyus.
zokutshala ovundlile izindawo engadini shady
Ukuze wenze lokhu, sebenzisa umthunzi-ukubekezela imivini for engadini (obizwa nangokuthi lianas). Ungakhohlwa ukuthi uma ukhetha le zilwane zisetshenziswa, badinga ukwesekwa oluqinile, njengoba bambulala sithole mass enkulu ngokwanele. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi poludrevesnyh izinhlobo. Isenzakalo esidume kunazo zonke - kuyinto amagilebhisi yentombazane, noma Parthenocissus (esesithombeni). Vine ikhula ukuphakama ngamamitha ayi-15, kanye undemanding zenhlabathi futhi Akudingi ukunakekelwa okukhethekile. Umehluko kuphela endaweni kakhulu ukubopha amaqabunga kungenzeka mncane hhayi njengezindawo ezigqamile.
Kaningi esetshenziselwa mpo ingadi Clematis, kodwa kufanelekile sezulu esishisayo ubusika bakhona abubandi. Lena umvini kunalokho namawashi ahlekisayo, ukhetha izindawo libalele, kodwa ukukhanya umthunzi ezimbi zingenza nokuhlukileko. Kufanele kuqashelwe izitshalo ezifana kirkazon, celastrus, Clematis.
izitshalo Shade-ukubekezela ampelnye
Summerhouse, ithala noma kuvulandi Kunzima ukucabanga ngaphandle sezihlahla enhle yezimbali, hung nemivimbo engu yayo obuluhlaza izimbiza uyahlanganyela. Ampelnye umthunzi nokubekezelana engadini aziziningi kuqhathaniswa yabo nezihlobo ilanga-onothando, kodwa noma kunjalo akhona. Ikakhulukazi, lobelia, chaza isethi shades okumsulwa okwesibhakabhaka okwesibhakabhaka. Esikhathini penumbra uyozizwa kahle, okubaluleke kakhulu, ukuqinisekisa emhlabathini waso evundile ukuthambisa avamile.
Okuningi mancane amathuba okuthi kungatholakala Bakool, dihondru Nolin thina singababoni. Naphezu amagama nzima futhi ezingajwayelekile, lezi zitshalo abasakwazi linesizotha, futhi ngesikhathi esifushane ukwakha amahlozi obukhulu embozwe ezinemibala egqamile.
Ukukhetha zokuhlobisa umthunzi nokubekezelana engadini, ungalindeli kuzo izimbali zawo ziwukudla obuningi, inflorescences esikhulu terry. Bonke bayigugu ngokuyinhloko ukubukeka zokuhlobisa of the amahlamvu.
Mayk Modano - NHL legend